Ilhan Omar oo ka guuleysatay weerar Siyaasadeed oo lagu soo qaaday | Hohad News
Ilhan Omar oo ka guuleysatay weerar Siyaasadeed oo lagu soo qaaday
Murashaxiin Madaxweyne iyo Siyaasiyiin Taageeray Ilhan Omar
Waxaa sidoo kale si buuxda u taageeray Ilhan Omar qaar badan oo kamid ah Yahuuda Maraykanka oo sheegay in Ilhan aysan necbeen Yahuuda balse ay xaq tahay inay cambaareyso xukuumada xagjirka ah ee Israel ee uu hogaamiyo Benjamin Netanyahu oo ay sheegeen inuusan metelin Yahuuda.
Senator Bernie Sanders oo ah murashaxa Madaxweyne ee xisbiga Dimuquraadiga ka dhex tartamaya ahna siyaasiga xiligan ugu taageerada badan Maraykanka ayaa sheegay inuu garab taagan yahay isla markaana uu difaaci doono Ilhan Omar. Senator Sanders ayaa qudhiisa ah nin Yahuud ah.
Kooxda Kudlada xildhibaanada Madowga Maraykanka ee kamid ah Dimuquraadiga ayaa taageero la garab istaagay Ilhan Omar.
Senatorada Kamala Harris oo ah haweenaydii ugu horeysay ee Madowga Maraykanka oo u tartameysa Xilka Madaxweynaha ayaa iyaduna sheegtay inay taageersan tahay Ilhan.
Murashaxiinta Madaxweynaha ee taageeray Ilhan ayaa waxaa sidoo kale kamid ah Elizabeth Warren iyo Tulsi Gabbard oo ka tirsan Golaha Wakiilada & Senate-ka.
Waji-gabaxii Nancy Pelosi
Kooxda ay hogaamineysay Nancy Pelosi oo ah Guddoomiyaha Golaha Wakiilada ayey lama filaan ku noqotay taageerada Ilhan Omar ku dhexleedahay Dimuquraadiga ayaa sheegay inay wax ka bedali doonaan qaraarkii ay doonayeen in loo codeeyo isla markaana sheegay inay ka saareen qoraalkaasi cambaareynta Ilhan Omar, waxayna sheegeen in qaraarkaasi kusoo koobi doonaan cambaareynta hadala Muslim & Yahuud-Naceybka ah.
Ololaha Xagjirka, Trump & Israel
Ilhan Omar ayey horey weerar ugu hayeen xisbi xaakimka oo uu hogaaminayo Donald Trump oo si toos ah marar badan u sheegay in Ilhan laga saaro guddiga Golaha Wakiilada u qaabilsan Siyaasada Arrimaha Dibada, dhinaca kale Ilhan ayaa weeraradan siyaasadeed ku heshay taageerayaal badan oo ah shacabka Maraykanka oo qaarkood cadaadis saaray xildhibaanada gobaladooda laga soo doorto inay garab istaagaan Xildhibaanada Soomaaliga ah.
Jariirada New York Times ayaa iyaduna qortay warbixin dheer oo muujineysa in kooxda Israel u ololeysa ee AIPAC asbuucyadii lasoo dhaafay olole xoogan ugu jireen inay ku cadaadiyaan hogaanka xisbiga Dimuquraadiga iyo waliba kuwa Jamhuuriga inay weeraraan Ilhan Omar.
Xildhibaanada ku xiran Israel oo horey awood badan ugu lahaan jiray Baarlamaanka Maraykanka ayaa si weyn uga cabsi qaba Xildhibaanada cusub ee Dimuquraadiga iyo ololaha Ilhan ee ka dhanka ah xukuumada Israel maadaama xildhibaanadaasi ay hada kamid tahay Guddiga Kongareeska ee Siyaasada Arrimaha Dibada.
Hay’ada danbi-baarista Maraykanka ee FBI ayaa hada wada baaritaano ku aadan kooxo iyo shaqsiyaad la sheegay inay Ilhan Omar ugu hanjabeen dil kuwaasi oo la tuhunsan yahay inay ka tirsan yihiin taageerayaasha Trump